I-10 ye-Anabolic Steroids eyaziwa kakhulu ngokuba ngumgubo kwi-2019
Iimveliso zamachiza okufumana imveliso kumayeza kunye namaziko
Sonke singavuma ukuba ukwakha umzimba yenye yeendlela zakudala ezijolise ekuphuculeni inkangeleko yabantu, ngokukodwa amadoda. Ngelixa wonke umntu ebetha umthambo ngesiphumo esahlukileyo esinqwenelekayo, into eqhelekileyo kukuba umntu ngamnye ufuna ukubonakala engcono, atshise amafutha ongezelelweyo kwaye ongeze umsipha ongakumbi. Kwabafazi, ukubuyiselwa kwimbonakalo yomfazi enomdla yinto ephambili elindelekileyo emva kokwakha umzimba. Nangona kunjalo, ukufezekisa oku, kuya kufuneka ukhethe i-an efanelekileyo I-Anabolic Steroids (AAS) ukufezekisa into oyifunayo.
Senze esi sikhokelo somthengi esizele ziingcebiso kunye neengcebiso zethu eziphambili zokukunceda ukhethe ogqibeleleyo I-Anabolic Steroids (AAS) izinto eziluhlaza.
Ukuthengisa okushushu Steroid Raw izinto uninzi Edume ngokufakwa Steroid Raw izinto Ezona zixhobo ziLuhlaza zeealteroal zeOral
I-testosterone Enathate / Uvavanyo lwe-E
Akukho kalo★★★★★ I-Trenbolone i-Acetate / iTren Ace / iTren A
Akukho kalo★★★★★ Methandrostenolone / Dianabol / Dbol
Eyona nto ithengiswa kakhulu yi-steroids eluhlaza okwethu kuthi kwiminyaka edlulileyo
Iimpawu eziphambili kunye nezicetywayo eziphambili ze-steroids
Eyona nto ilula yokwenziwa okungekho lula kunye nexabiso eliphantsi lesoftware
Iyona nto ininzi kunye eyamkelekileyo i-steroids emarike.
Iyona nto ininzi ethandwayo eTren phakathi kwabadlali bezemidlalo
I-trenbolone i-Acetate inamandla kuneTrenbolone Enanthate ngenxa ye-Enanthate ester ithatha ubuninzi besisombululo.
Uninzi lwabasebenzisi 'baqala ukuhamba neH hormone yeTrenbolone rhoqo i-Trenbolone Acetate.
Abathengi banqwenela ukufumana i-steroid yomninzi ngomlomo
I-Dianabol inokuba yingenelo kakhulu kwisakhiwo sobunzima.
Iziphumo ze-Dianabol kulula ukubambelela kuzo xa kusetyenziswe kuyekwa ngokuthelekiswa neepilisi.
Jonga amaxabiso ngakumbi Iinkcukacha Jonga amaxabiso ngakumbi Iinkcukacha Jonga amaxabiso ngakumbi Iinkcukacha
Nazi i-10 ephezulu ye-Anabolic Steroids Raw:
Elona gama laziwayo lama-Anabolic Steroid
Olona khetho lubalulekileyo lwe-steroid zezi:
I-Dianabol powder (methandrostenolone)
I-Deca Durabolin (i-nandrolone decanoate powder)
I-Winstrol powder (stanozolol)
I-Equipoisematerial (i-boldenone undecanoate eluhlaza)
Awona magama eeSteroid aphumelelayo
Ngokomgangatho womsebenzisi, ezona zixhobo zisetyenziswayo zezi:
I-Trenbolone powder (ophumeleleyo ocacileyo)
IHormone yokuKhula kweMntu (HGHraw)
Ukuqonda iintlobo ezahlukeneyo ze-Anabolic Steroids
Kukho iinkcaza ezimbalwa ezibalulekileyo ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha i-Anabolic Steroids. Ungaqala ngokuthelekisa iinjongo ezahlukeneyo ukuze ukhethe ezona zilungileyo.
Abantu bakhetha iintlobo ezahlukeneyo ngeenjongo ezahlukeneyo:
ukuxhaphaza ii-steroid zokwakha izihlunu
intsebenzo ii-steroids zamandla kunye nokunyamezela
ukusika ii-steroid zokutshisa amanqatha
Ezinye izizathu zokusetyenziswa zibandakanya ukuphilisa kunye nokubuyisela kunye nokunyusa imetabolism.
Zombini iinjongo zonyango kunye nezingekho mthethweni, i-AAS inokuthathwa:
njengepellets ezifakwe phantsi kolusu
ulusu njengekhrimu okanye ijeli
Iifom zomlomo zithathwa ngomlomo. Babandakanya:
I-Mesterolone (iproviron powder)
I-Methandienone (i-Dianabol powder)
I-Oxandrolone (i-Anavar powder)
I-Oxemetholone (i-Anadrol powder)
I-Stanozolol (i-Winstrol powder)
Iifom ezinokukhubazeka zibandakanya:
I-testosterone enanthate powder
I-Trenbolone i-Acetate powder
I-Boldenone undecylenate eluhlaza (Equipoise)
I-Methenolone enanthate powder (Primobolan)
I-Nandrolone decanoate powder (i-Deca Durabolin)
Thelekisa i-Anabolic Steroids edume kakhulu kwi-2019
Igama lemveliso I-Teststeorne Enanthate powder Dianabol powder I-Trenbolone i-Acetate powder I-Anavar (Oxandrolone) ipowder Stanozolol powder Ukukhula komntu iHormone eluhlaza I-Nandrolone Decanoate powder IBoldenone Undecylenate eluhlaza I-Drostanolone Propionate powder I-Methenolone Inanthate powder
Ukusika ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
Ukunyakaza ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆◆◆◆ ◆◆◆◆◆
Imiphumela ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆◆ ◆
UPhononongo lwethu lwe-10 lweeSteroids ezaziwa kakhulu
I-1: I-testosterone powder
I-testosterone yeyona nto ibalulekileyo ye-anabolic steroid eneneni eveliswa ngumzimba wakho ngokwemvelo. Ngoku ngeli xesha le steroid ngokucacileyo inceda ukubumba izihlunu zesoda kunye namandla onokuba nawo, inoxanduva nakwezinye iimpawu zobudoda ezinje ngelizwi lakho elinzulu kunye neenwele zobuso. Xa sisetyenziswa njengechiza lokuphucula ukusebenza, i-Testosterone iyakunceda ukwanda kwesayizi kunye namandla eemisipha zakho, ukunciphisa umisipha, kunye nokunyusa ukubuyela kwesihlunu.
I-testosterone ene-ester ethatha ixesha elide
Ezona ndlela zixhaphakileyo ezisetyenziswa kwihlabathi liphela ngokuphucula imbaleki
I-2: I-Trenbolone powder
I-Trenbolone ithathwa ngokubanzi njengenye yeyona nto inamandla ye-anabolic steroid eyakhe yenziwa. Ngapha koko, yomelele izihlandlo ezihlanu kune testosterone ngenxa yomyinge we-androgenic we-500 ukuya kwi-500 xa kuthelekiswa ne-100 ukuya kwi-100. Kwabakhi bomzimba, ngakumbi, le yi-steroid ethandwayo kuba nje bakhawulezisa ngokukhawuleza ukupakisha izihlunu kunye nokufumana amandla. Iyabanceda abo bafuna ukutshisa amanqatha ngokukhawuleza kunokuba bebeya kwenza ngokwemvelo.
Esona sisetyana sityeshelweyo seTrenbolone
Izitofu zemihla ngemihla zihlala zinconyelwa
Eyona nto iluncedo kwabo bafuna inzuzo ngokukhawuleza
I-3: i-Anavar (Oxandrolone) ipowder
U-Anavar umele omnye we-anabolic oral steroids ethandwa kakhulu kwixesha lonke, kwaye oku kubangelwa kukunyamekela kakuhle. Le ngenye yezinto ezimbalwa ze-anabolic steroids ezingasetyenziselwa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabasetyhini, kwaye yile enye yezona zinto zichaphazelekayo. Nangona kunjalo, kwezinye iindidi zika-Anavar ziyanconywa kakhulu ngenxa yobunjani balo, kodwa ngoku kubangelwa ukulindela okungenangqiqo.
Eyona nto ibizwa ngokuba yi-anabolic steroids eyaziwa kakhulu ngalo lonke ixesha
Kakhulu ngenxa yohlobo lwayo enyamezelwe kakuhle
Iimbambo ezimbalwa ze-anabolic ezingasetyenziswa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabafazi
Ukuxabisa kakhulu ngenxa yobunjani bayo
I-4: I-Nandrolone Decanoate powder
INandrolone Decanoate yenye yezona zinto zisetyenziswa ngokufuthi i-anabolic steroids phakathi kokuphucula iimbaleki. Kuyaziwa ngokuba yinzuzo enkulu kwi-non-msimu we-steroid enomdla, kodwa ikwayintandokazi kwimidlalo emininzi yezemidlalo kwizibonelelo zayo zonyango. Ngenxa yokuxhamla kakhulu kwezibonelelo zonyango, i-hormone yeNandrolone yenye yezona pilisi ze-anabolic ezifanelekileyo kwezonyango.
Eyona nto isetyenziswa ngokuxhaphakileyo i-anabolic steroid phakathi kokuphucula iimbaleki
Yaziwa ngokuba yinzuzo enkulu yexesha elingangesizini yeminyaka
Enye yezona zixhobo ze-anabolic ze-insulin ezifanelekileyo kwezonyango
I-5: IBoldenone Undecylenate eluhlaza
I-Boldenone Undecylenate yi-testosterone etholakala i-anabolic androgenic steroid kwaye ifomtosterone ishintshiweyo. Inguqu encinci kakhulu kwi-bond edibeneyo kabini kwikharbhoni enye kunye nezikhundla ezimbini. I-estericylenate ester ivumela ukukhutshwa kwesiqhamo kwi-Boldenone malunga neentsuku ze-3-4 emva kokujova, ngokukhululeka okuqhubekayo kwehommoni ukulandela malunga neentsuku ze-21.
Eyona nxalenye ibalaseleyo yale steroid kukukwazi kwayo ukubonelela ngokuqina komzimba
Utatomkhulu wayo yonke i-anabolic steroids
Enye yezona zixhobo zethembayo ezithembekileyo ngabaqhubi abaziingcali kunye nabakhi bomzimba
I-6: I-Dianabol powder
I-Dianabol imele enye yezona zinto zidume kakhulu kunye nezinye zeyona nto ibaluleke kakhulu ye-anabolic steroid ngalo lonke ixesha. Ngaphandle kombuzo, le yeyona nto isaziwa kakhulu yeyomlomo. Nangona iphantse ifumaneke njengethebhulethi yomlomo, i-Dianabol inokufumaneka njengesisombululo, kodwa amacwecwe amele iindlela eziphambili zolawulo.
Eyona nto ibaluleke kakhulu ye-anabolic steroids yalo lonke ixesha
Esona soda somlomo sithandwa kakhulu ekuhlaleni sithe ngqo kwimarike
Esona sisicatshulwa sakha sasinconyelwa nguArnold
I-7: I-Stanozolol powder
Nangona enye ye-anabolic steroids eyaziwayo, iStananol iyathandwa kakhulu kwi-steroid esebenzisa abantu. Ngendlela ezininzi i-anabolic steroid enobumnene enokusetyenziswa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabasetyhini. Kubaluleke kakhulu, uye wabonisa ukuphumelela kakhulu kwimisebenzi eninzi yokuphucula ukusebenza.
Ezona zaziwayo ze-anabolic steroids
Eyaziwayo phakathi kwesininzi kwi-steroid isebenzisa inani labemi
I-anabolic steroid enokusetyenziswa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabafazi
Isebenza kakhulu kwimigudu yokuphucula intsebenzo emininzi
I-8: Ukukhula komntu iHormone eluhlaza
IHormone yokuHlaba koLuntu i-hormone yeprotheni eveliswa yi-pituitary gland. Iveliswa ngabantu bonke abaphilayo, kwaye iphakamileyo ngamanqanaba aphezulu ebuntwaneni. I-HGH imela enye yezona i-hormone ezibalulekileyo emzimbeni womntu njengoko ichaphazela amathambo ethu, imisipha yamathambo kunye nezitho zangaphakathi, kunye nokudlala indima kwezinye iindawo ezininzi kuwo wonke umzimba.
Ihomoni yeprotein eveliswa yi-anterior pituitary gland
Eyona idume kakhulu kwi-steroid isebenzisa inani labemi
Eyona nto ibaluleke kakhulu kwiihomoni emzimbeni womntu
I-9: I-Drostanolone Propionate powder
Uninzi lwayo yonke i-Masteron kwimarike iya kuba yi-Drostanolone Propionate. IDrostanolone Propionate yi-dihydrotestosterone (DHT) evela kwi-anabolic steroid. Ngokukodwa, i-Masteron yi-DHT i-hormone etshintshwe ngendlela eyongeziweyo yokongezwa kweqela le-methyl kwisikhundla se-carbon 2, oku kukhusela i-hormone ekuqhekekeni kwe-metabolic yi-3-hydroxysteroid dehydrogenase enzyme, efumaneka kwimisipha yamathambo. Ikwanyusa kakhulu imeko ye-anabolic yehomoni.
Eyona ester yeDrostanolone esetyenziswe ziimbaleki ezinobuchule kunye nabakhi bomzimba
Eyona androgenic ingaqhelekanga
Omnye owaziwa kakhulu phakathi kwabo bantu bakhuphisanayo okanye abajongileyo
kwindalo yokuhlobisa ngakumbi
I-10: I-Methenolone Enanthate powder
I-Methenolone Enanthate ithathwa njengeyona ndawo ikhuselekileyo ye-anabolic steroid kwintengiso kwaye ithwala ireyithingi ekhuselekileyo yokubuyisela eli bango. Ngapha koko, le steroid isetyenziswe ngempumelelo kunyanga abantwana abaphantsi komzimba kunye neentsana ngaphambi kwexesha. Ikwabhalelwe i-osteoporosis kunye nesarcopenia ..
Eyona nto isetyenziswa kakhulu xa usika imijikelezo, xa kufumaneka ubunzima obuninzi
Isidakamizwa esisebenza ixesha elide
Isoftware ye-anabolic yomlomo eyahlukileyo kancinci xa kuthelekiswa ne-anabolic ezininzi ezininzi zomlomo
Umthombo othembekileyo we-Anabolic Steroids onokuqwalaselwa ngaphambi kokuba uthenge
Yenza uphando kwiindidi ezahlukeneyo zeeSteroids
Ungathenga ngokulula i-steroids powder kwi-intanethi kwaye ugqithise ngokungaziwayo ekhaya lakho. Nangona kunjalo, kuya kufuneka wenze uphando ngaphambi koku-odola i-steroids powder. Okokuqala, fumana ukuba ngaba ufumana i-steroids powder efanelekileyo. Ukuba unabahlobo kwindawo yokuzivocavoca osebenzisa i-steroids powder, fumana ukuba yeyiphi na abayisebenzisayo kwaye ubuze ngezona zilungileyo zabaqalayo. Unokucela neengcebiso kwabanye abakhi bomzimba kwiiforum ze-intanethi.
Ukujonga ukuvavanywa kweepoda ezahlukeneyo zeSodaids onomdla onomdla kuzo nako kuluncedo. Ngokukodwa, kufuneka ufumanise ukuba isebenza njani i-steroids powder, luhlobo luphi lokutya kunye neenkqubo zokuzilolonga zibahambela kakuhle kunye nemiphumo emibi enokubakho. Ukuba unemeko esele ikhona, fumana ukuba kunokwehla kokusetyenziswa kwepoda ethile ye-steroids onokuba uyilandele.
Khetha umthengisi oqinisekileyo weSteroids
E-China, kukho iinkampani ezininzi zokwenza i-steroids powder yokuthengisa. Nangona kunjalo, ukuba uthenga i-steroids powder online, awusoze uqiniseke ngemvelaphi yezongezo. Kukho intengiso enkulu engaphantsi komhlaba yesodaids umgubo kwihlabathi jikelele kwaye iilebhu ezininzi ezingaphantsi komhlaba, ngakumbi ezivela eYurophu, zingakuthumela ngokungekho mthethweni i-anabolic steroids powder. Ngenxa yempilo yakho, kungcono uku-odola i-steroids powder evela kwiinkampani ezaziwayo.
Sebenzisana nathi, sinokukwenza ngokugqibeleleyo
Iimveliso zethu ziveliswa phantsi kwe-cGMP kwaye umgangatho ungalandelelwa.
Ubunyulu buqinisekisiwe akukho ngaphantsi kwe-98%. I-COA; I-HPLC; Iingxelo zovavanyo ze-HNMR zinokubonelelwa.
Amandla ethu okubonelela azinze kakhulu kwaye acwangcisa imveliso yobunzima rhoqo.
Sinamava atyebileyo ekukhonzeni iimarike eziphezulu kwihlabathi liphela.
Sebenzisana nomzi-mveliso wethu ngokuthe ngqo, unganciphisa iindleko zakho.
I-Anabolic Steroids Raw Purchasing FAQs
Q: Ungabeka njani i-odolo kwinkampani yakho?
I-1. Ungasithumela iodolo yakho yokuthenga kwiwebhusayithi yethu okanye kwi-imeyile yethu ([Imeyile ikhuselwe]), iikowuteshini ziya kunikwa sakuba nje sifumene.
I-2.Iintlawulo ezenziweyo kunye nomamkeli wedilesi kunye.
I-3.Impahla iya kuhanjiswa ngenombolo yokulandelela, umfanekiso wephakheji, inombolo yokulandelela kunye nomhla wokufika oqikelelweyo.
4.Goods zifunyenwe kwaye zinike izimvo.
Q: Zeziphi iindlela zokuhlawula ezinokwamkelwa yinkampani yakho?
A: Ukudluliselwa kweBhanki; Uwestern Union; ImaliGram; I-Bitcoin
Q: Isampulu iyafumaneka?
A: Ewe, uninzi lweemveliso zingathunyelwa njengeesampulu zasimahla, kodwa kuwe uhlawula iindleko zokuhambisa.
Q: Uqinisekisa njani umgangatho wemveliso ngaphambi kokubeka iiodolo?
A: COA, HPLC, HNMR ziyafumaneka. Kwaye amaphepha oVavanyo olwenziwe ngeelebhu zomntu wesithathu ziya kunikwa ixesha nexesha.
Q: Ndiyakuqinisekisa njani ukuba imali yam ikhuselekile?
A: Imali inokubuyiselwa ngaphambi kokuba kuthunyelwe iimpahla.
Q: Kuthekani ngexesha lokuhambisa?
A: Ngaphakathi kwe-1 ~ 3 kwiintsuku zomsebenzi emva kokuba kuqinisekisiwe intlawulo. (Iiholide zaseTshayina azibandakanywanga).
Q: Ngaba kukhona isaphulelo?
A: Ewe, ngobungakanani obukhulu, sihlala sixhasa ngamaxabiso angcono.
Q: Ngaba unokuqinisekisa ukubakho kokufumaneka?
A: Ukubanakho ukubonelela kuzinze kakhulu kwaye ishedyuli yemveliso yobuninzi rhoqo.
I-Hengfei Biological, efunyenwe kwi-2008, yinkampani ephezulu yezoxhishino yezobisi ezibandakanya imveliso, uR & D kunye neentengiso.
Isikhokelo sokuGqibela kwiLiothyronine sodium / T3 yokwakha umzimba
Isikhokelo sokugqibela seTrestolone Acetate (MENT) yokwakha umzimba
IWest of Yucheng Station, Idolophu yaseYucheng, isithili seLisheng, isiLuhe, isixeko saseHenan eChina